Izixhobo zenayiloni, njengokuzilungiselela kobunzima bokukhanya, kulula ukuthengisa, ukumelana ne-abrasion elungileyo, ubomi obude bokusetyenziswa. Ukukhuselwa kwamalungu e-stell, kuye kwasetyenziswa kwishishini lobunjineli phantse iminyaka engamashumi amathathu, kwaye isabelo sayo sentengiso siyakhula kutshanje ngexabiso eliphantsi kunye nongcoliseko oluphantsi kwindalo esingqongileyo.
Izitayile ze-nylon zikwasetyenziswa ngokubanzi. Iipulile zisetyenziswa naphina apho kukho iintambo zentsimbi. Iipleyi eziqhelekileyo zenziwe nge-iron cast, i-cast cast kunye nezinye izinto. Iipulleys zentsimbi ziyayigqiba intambo, zichaphazela kakubi ubomi bekhebula elibizayo kwaye zisongele ukusetyenziswa ngokukhuselekileyo kwezixhobo. Ukusetyenziswa kwezinto ze-nylon ukwenza i-pulleys ngokuchanekileyo kukujongana nezithintelo ezinzima ze-pulleys zentsimbi kwaye zaphuhliswa kwaye zafakwa
Izihlanganisi zenayiloni zisetyenziselwa ukudibanisa imingxunya emibini (ukuqhuba ishafti kunye neshafti eqhutyiweyo) ngeendlela ezahlukeneyo ukuze zikwazi ukujikeleza kunye ukuhambisa izixhobo ezomeleleyo. Ekuhanjisweni kwamandla okukhawulezayo kunye nomthwalo onzima, ezinye izinto ezihlanganisiweyo zinomsebenzi wokungxama, ukuthambisa kunye nokuphucula ukusebenza okunamandla kweshafting.
Nylon isilayidi sisetyenziswa ngokubanzi kwilori crane, Kwaye ingaveliswa ngobukhulu obahlukeneyo, iimilo, ukubamba iimfuno zelori ezahlukeneyo.
Izinto zokuhlambela i-nylon zineempawu ezigqwesileyo zokugquma, ezingekho kumazibuthe, ukufudumeza ubushushu, ubunzima bokukhanya, iiwasher zeplastiki zezinto ezizezinye nazo zinokumelana nobushushu obuphezulu, amandla aphezulu, ukumelana nomhlwa, ezinye iimveliso zinomsebenzi wokulwa nokuwa, osetyenziswa ngokubanzi kumacandelo ohlukeneyo emizi mveliso.
Indawo yokuvelisa ipini yenayiloni is bushing. Izikhonkwane zenayiloni zisetyenziswa ikakhulu ekusebenzeni komngundo odityanisiweyo. Xa kuthelekiswa nezikhonkwane zentsimbi, izikhonkwane zenayiloni zonakala ngokulula, eziqinisekisa ukuba ukungunda okuntsonkothileyo akonakalanga. Ke ngoko, kukholelwa ukuba ukusetyenziswa kwezi zikhonkwane zenayiloni kuya kulinciphisa kakhulu inqanaba lezinto ezibunjiweyo.